bransaing | Myanmar Mp3 Album
Home / bransaing
Tag Archives: bransaing
ဒီသီချင်းလေးကကွန်ပျုတာနဲအကြမ်းသွင်းထားတဲ့သီချင်းလေးပါ..မိုးရွာတုန်းရလာတဲ့ အတွေးလေးနဲရေးထားပါတယ် ဒီမှာနားထောင်ပြီးဒေါင်းလို့ရတယ် Download Here
August 10, 2013 bransaing ၀ါသနာရှင် အခွေများ Media Myanmar Underground bransaing Leaveacomment
မျှော်လင့်လို့ချစ်မဲ့သူ (Demo) – Bransaing ft.YuYu
မျှော်လင့်လို့ချစ်မဲ့သူ (Demo song ) Music : R&U Production Lyric : Bransaing Vocal : Bransaing feat :YuYu Studio :David (TGI) Facebook :http://www.facebook.com/pages/Bransaing/198173486898078 ၀ါသနာ၇ှင်အဆင့်ဖြစ်ပါသောကြောင့်အမှားပါပါကသိးခံခွင့်လွှတ်ပေးပါရန် 🙂 Download with Mediafire Download with Minus Download with Dropbox credit to MHC
April 3, 2013 bransaing Myanmar Underground bransaing Leaveacomment
Song Name : သူငယ်ချင်းအတွက် ( Demo Version) Vocal & Lyric : Bransaing Music by shadowville Studio : David ( TGI) Facebook :http://www.facebook.com/pages/Bransaing/198173486898078 Dowload & Listen Link
March 7, 2013 bransaing Myanmar Underground bransaing
Song Name : အရာအားလုံးနဲ့ငါရဲကောင်မလေး Vocal & Lyric : Bransaing Music : R&U Production Studio : David ( TGi) Contect : [email protected] Facebook :http://www.facebook.com/pages/Bransaing/198173486898078 Dowload Mp3 Here
November 18, 2012 bransaing Myanmar Underground bransaing paradise Leaveacomment
Song Name : မ အနား၇ှိရင် Vocal & Lyric : Bransaing Studio : David ( Taunggyi) Contact Face book page link Here Dowload Mp3 Here
November 12, 2012 bransaing Myanmar Underground bransaing paradise Leaveacomment
Song Name … အမေ Vocal… cheap cialis online ……..Bransaing Lyric………….Bransaing Mixing………..Bransaing Gmail………[email protected] Dowload & Listen song Here Facebook Page zp8497586rq
April 20, 2012 bransaing Myanmar Underground bransaing paradise
Song Name : မနိးစပ်တဲ့ချစ်သူ Vocal : Bransaing Lyric : Bransaing Studio : TKG Contect : [email protected] Facebook : http://www.facebook.com/pages/Bransaing/198173486898078 This is demo song 🙂 Dowload with Minus
February 21, 2012 bransaing Myanmar Underground Paradise bransaing paradise Leaveacomment
Be All Right Baby ( Mix ) …Bransaing
Be All Right Baby ( Mix ) Song Name : Be All Right Baby ( Mix ) Vocal : Bransaing Lyric : Bransaing Song Mixing : Ko Thar Nge & Bransaing This is Demo song.. ဒိသိချင်းလေးကို ကိုသားငယ်နဲတူတူအကြမ်းလုပ်ထားတာပါ ရေးထားတာကကြာပါပြိး.. သူငယ်ချင်းတိုနားထောင်လို့ရအောင်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် Dowload With Minus
November 11, 2011 bransaing ၀ါသနာရှင် အခွေများ Unreleased Albums bransaing Leaveacomment
Bransaing’s Song collection
ကျနော်ဆိုထားတဲ့သိချင်းအားလုံးကိုပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..အရင်တင်ထားတဲ့လင့်တွေကပျက်နေတာတွေများနေလို့အားလုံးကိုပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ အရင်သိချင်းတွေထက်ကွာလတိကောင်းကောင်းလေးနဲတင်ပေးထားပါတယ်.. တချို.သိချင်းတွေကအသံမညိတာတွေ..တိုးနေတာတွေကိုပါပြင်ထားပါတယ်..ဒေါင်းရတာအဆင်ပြေအောင်ကောင်းတဲ့လင့်လေးတွေရွေးပြိး တင်ပေးထားပါတယ်..ကျနော်သိချင်းကိုအားပေးတဲ့သူငယ်ချင်းအားလုံးပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေလိုဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် 1. Let’s Go to The Party Feat: Moeyan,HeinGyi,RPG,PhooPhoo Lyric ; Paradise Mixing by TKG Dowload This Song 2.မ ရင်ထဲကနေရာလေးတစ်ခု Lyric By Bransaing Mixing By KoTharNge & Bransaing Dowload This Song 3. မေ့လိုမရတဲ့လူ Lyric By Paradise Feat: Moeyan,HeinGyi,RPG,PhooPhoo Mixing By TKG Dowload This Song 4.မျှော်နေပါမ Lyric By Moeyan & Bransaing Feat: Bransaing … Continue Reading →
August 27, 2011 bransaing ၀ါသနာရှင် အခွေများ Unreleased Albums bransaing Leaveacomment
“မ ” ရင်ထဲကနေရာလေးတစ်ခု Bransaing
မ သိချင်းတွေကိုနှစ်သက်တဲ့သူတွေကြိုက်မယ်လိုထင်ပါတယ် “မ” ရင်ထဲကနေရာလေးတစ်ခု ( Bransaing ) ‘ဒိမှာဒေါင်းလိုက်နော် Download With Up4vn Download With Mediafire credit from MHC ဒေါင်းရတာအဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ဒိအောက်မှာကြိုက်တာနဲဒေါင်းလိုက်ပါ Download http://www.mediafire.com/?859425es77e5qn9 http://up4vn.com/files/0VAAT5E2/__________________________________________________________bransaing__.mp3.html ဝေဖန်အကြံပြုလိုပါက [email protected]
July 28, 2011 bransaing ၀ါသနာရှင် အခွေများ Unreleased Albums bransaing paradise3Comments
ဒိသိချင်းလေးကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲအိမ်မှာအကြမ်းသွင်းထားတာပါ..ရိုးရိုး Record နဲသွင်းထားတာပါ rap တွေကနည်းနည်းပိန်းပါတယ်.cours ကိုကြိုက်လိုသူငယ်ချင်းတွေအတွက်တင်လိုက်တာပါ.. New Version မကြာခင်ပြန်တင်ပေးပါမယ်..သည်းခံပြိးနားထောင်ပေးပါအုံး သိချင်းဒေါင်းရန်လင့် http://up4vn.com/?d=02SKB4BL
May 27, 2011 bransaing Unreleased Albums bransaing paradise2Comments
မေ့လိုမရတဲ့လူ…Paradise ( feat: phoo phoo )
paradise mix tape မှာပါမဲ့သိချင်းလေးပါ။အရင်သိချင်းထက်ကွာလတိကောင်းကောင်းနဲတင်ပေးထားပါတယ်။ သိချင်းဒေါင်းရန်လင့် http://up4vn.com/?d=LRFAFWAD ဝေဖန်အကြံပေးလိုပါက [email protected] , [email protected]
May 12, 2011 bransaing Unreleased Albums bransaing paradise Leaveacomment